Ma og tahay wax dhacay, socda ama wax laga yaabo in dan samayn?
Ha ka waaban inaad nala soo xiriir! Vi tar väldigt gärna emot förslag på vad mer som kan läggas upp här på Holmbygden.se.
Laga helay maqaal ku saabsan Holm ama sheeko warbaahinta Holmare?
Noo soo dir sida ugu dhakhsaha badan link a si article ama qori wargeyska la akhrisan kartaa in.
Sida loo soo diro ogaysiin?
Habka ugu sahlan waa in la isticmaalo foomka our in this xaq u. Buuxi kuna soo gudbiyaan, cad!
The qaabka iyo sida aan u hagaajin. Ku qor haddii aad wax rabitaanka gaarka ah, t.ex. link a. Fadlan ku lifaaq / qaar ka mid ah sawirada dhigma, markaas wararka more cad ah oo xiiso leh.
email noogu soo halkii?
Sidoo kale waa suurto gal ah in email noogu news qoraalka ah si ay u info@holmbygden.se. Fadlan ku lifaaq hal ama in ka badan sawirro ku haboon.
Su'aalo ah ama walaac?
Waxa kaliya wac ama u qor webmaster ah.
Comments on website ka?
Haddii aad qabtid wax ah faalooyin oo ku saabsan website aan jeclaan lahaa in ay leeyihiin, kuwaas oo. Ma jiraan wax qalad ah, maqan ganacsigaaga in “shirkadaha” mise waxaa jirta link kasta oo uma shaqeeyo? Nala soo xiriir halkan!
Ma doonaysaa in ay ka baxaan Salaan yar ama raad yar website-ka?
Welcome to qori line ah guestbook The. U dir WEBSITE a qabyada ah ee. All talooyin waa la soo dhawaynayaa!
Title Hindise for news:*
talooyin Text for news:*
Xusuusnow in xitaa noocan ah wax kasta oo magaca iyo xiriir macluumaadka aad rabto in aad soo bandhigaan on page guriga.
Codsiyada taariikhaha sii daayo:
fariin Personal in webmaster on wararka (ma posted on website):
sawir 1. Fadlan ku lifaaq photo(waa)/files hoos:
qaabab file taageerayaan:
size file ugu badnaan: 25MB.
sawir 3 (isticmaal foomka dhowr jeer haddii loo baahdo):
PS. Ka dib markii diraya soo jeedinta cusub ayaa sidoo kale qori kartaa warqad taariikheed gaaban oo jadwalka degmada ee Holm la wadaago. Halka aad ah loola xiriirinayo doonaa nidaamka si toos ah ka dib 10 seconds aad ka dib markii riix “diri”.
Tpl Arnäs 255, mot HusumAkhri wax dheeraad ah